ယောင်္ကျားလေးတိုင်း မသိတဲ့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ချက် – Trend.com.mm
ကိုယ့်ဖက်က ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်နေပါစေ၊ ကိုယ့်ချစ်သူမိန်းကလေးက ကိုယ့်ကို ဖွင့်မပြောဘဲ ထိန်ချန်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်(၅)ချက် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်သူ ကောင်မလေးတွေ ထိန်ချန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်(၅)ချက်ကို Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်ချက် ၁။ ပိုးပန်းဖို့အရေး မနှေးပါစေနဲ့
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ကိုယ်က စိတ်ဝင်စားလို့ ချစ်စကား လိုက်ပြောရင် ကောင်မလေးက ” ရှင့်ကို ကျွန်မလေ မြင်မြင်ချင်း ချစ်စိတ်ဝင်သွားတယ် သိလား ” လို့တော့ ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှာခေါင်းရှုံ့၊ ခြေဆောင့်ပြီး ကိုယ့်ကို မြင်မြင်ချင်း အမြင်ကတ် တဲ့အမူအရာ လုပ်ပြသွားတာကို ခံရမှာ အသေအချာပါပဲ။ မူတာပေါ့နော်။
ကိုယ်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လက်ဆယ်ဖြာ ယှက်ကာဆက်ပြီး အသည်းနှလုံး အလှူခံနေပြီဆိုရင် မိန်းကလေးဘက်က စတင်ပြီး စဉ်းစားခန်းဝင်ပါပြီ။ ” အင်း ရုပ်ကလေးကတော့ မဆိုးဘူး၊ ချောချောလေးပဲ၊ ဒါပေမယ့် မူလိုက်အုန်းမှ ” ဆိုပြီး ချစ်တော့ချစ်တယ်။ မိန်းကလေးတန်မဲ့ နှုတ်အလိုကိုတော့ မလိုက်သေးဘူး ဆိုပြီး ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း ကိုယ်အမူအရာ တွေနဲ့ပဲ ပြောနေပါလိမ့်မယ်။ ချစ်ပါတယ် ကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး ဗြုန်းစားကြီး အဖြေပေးအုန်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ ရုပ်က ပုံမလာ၊ ပန်းမလာ တောဂိုက် ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ မျက်စောင်းတွေ၊ ဂျိုစောင်းတွေ၊ လက်ဝါးစောင်းတွေ အကျွေးခံပြီသာမှတ်ပါ။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို လက်ဖြန့်တောင်း တော့မယ်ဆိုရင် အချိန်အနည်းငယ်ကနေ အချိန်အများကြီး ပိုးပန်းပေးဖို့ လိုပါမယ်။ မိန်းကလေးမို့ အရှက်အကြောက် ကြီးတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတို့သဘာဝကို သိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိုယ်ရှိနေပေမယ့်လည်း ဖွင့်ပြောဖို့ ခက်လှတဲ့ အနေအထားကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက် နားလည်ထားရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပိုးပန်းဖို့ အရေး ၀န်မလေးရပါဘူး။
လျှို့ဝှက်ချက် ၂။ မပြောရစေနဲ့ အလိုက်သိပါစေ
မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ်တို့ ယောက်ျားတွေထက် ဆက်ဆံရေး ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ မိတ်ဆွေများတယ်ပေါ့။ ယောက်ျားတွေ ထက်လည်း စကား များများ ပြောနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ “အင်း၊ အဲ၊ အော်” လုပ်တတ်ကြတယ်။ (Follow ကောင်းတာပေါ့) ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောလို့ သူလေးက ကိုယ့်ကို ” ဟီလိုက်၊ ဟဲလိုက် ” မလုပ်ဘဲ၊ ” အင်းလိုက်၊ အဲလိုက် ” ချည်းပဲ လုပ်နေပြီဆိုရင် သေချာပေါက် မှတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ပြောနေတဲ့ စကားကို ရာနှုန်းပြည့် စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုတာ ကျိန်းသေနေပါပြီ။ ကိုယ်က စကားတစ်ခွန်း ပြောလိုက်တိုင်း သူလေးက “သြ၊ အင်း၊ အဲ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဒီလိုလား၊ ဒါ မှန်တာပေါ့ ” စတဲ့ စကားလုံး တိုတိုတွေနဲ့ ပြောနေပြီဆိုရင် ကိုယ်က အလိုက်သိတော့။ သူလေးကတော့ ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး။ လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ ကိုယ်ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဒီမှာတင်ရပ်ပြီး၊ ဟာသနှောပြီး တစ်ခြားအကြောင်းအရာ ပြောင်းပြောဖို့ ကြီးစားပေတော့။
လျှို့ဝှက်ချက် ၃။ တစ်ဘက်စောင်းနင်း ခင်မင်မှုဇာတ်လမ်း
သ၀န်တိုတာပဲ ပြောရမလား၊ အချစ်ကြီးတာပဲ ဆိုရမလားပဲ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ခင်မင် ရင်းနှီးစွာနဲ့ အပေါင်းအသင်း လုပ်လို့ရပေမယ့် သူချစ်နေတဲ့ သူ့ချစ်သူကောင်လေး ကိုတော့ သူ့သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးသွားမှာ ခင်မင်သွားမှာကို မလို လားကြပါဘူး။ ဒါကို မယုံမရှိပါနဲ့။ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးနှစ်ယောက် ရှိတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူက သူ့ကောင်မလေး သူငယ်ချင်းကို ရင်းရင်းနှီးနှီးကြီး ဆက်ဆံတာကို သူ့ကောင်မလေးက နှစ်သက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မခေါ်နိုင်၊ မပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်အထိ ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူလေးရဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းနဲ့ တွေ့ရင် စကားပြောတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အနေအထိုင် အမူအယာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ရှိသင့်ပါတယ်။ မုန့်ကိုသာ ဝေစားမယ်။ အချစ်ကိုတော့ ဝေမစားနိုင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ မနောကို ယောက်ျားသားတွေ အလိုက် သိနေဖို့ လိုပါမယ်။
လျှို့ဝှက်ချက် ၄။ ကိုကိုနော်
ဘယ်ကောင်မလေးကမှ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးကို ကိုယ့်ထက်လှတဲ့၊ ချောတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ အရောဝင်နေတာကို ရှုစိမ့်မယ်၊ မုဒိတာပွားနိုင်မယ် မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီမဒီချောကို ရိုးရိုးသားသား လို့ပဲပြောပြော၊ ဖြူဖြူစင်စင် လို့ပဲဆိုဆို ဒါမှမဟုတ် နှာရောင်ငန်းဖျားစိတ်နဲ့ လျှာကြောရှည်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကောင်မလေးက အစိုးရိမ်တွေပိုပြီး ဘယ်လိုမှ ကြည့်မရ၊ ရှုမရ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်အားငယ် နေပါလိမ့်မယ်။ ဒ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို ဘယ်လောက် ချစ်ပါတယ်၊ ကြိုက်ပါတယ်၊ သစ္စာရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ ကတိပေးပေး တစ်ဖက်သတ် သံသယ၀င်နေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပုရိသ တွေအနေနဲ့ စုမိတဲ့အချစ်တွေအားလုံး သူလေး တစ်ယောက်တည်း အတွက်ပါလို့ သက်သေပြနိုင်အောင် အနေအထိုင်လေးတော့ ဆင်ခြင်ကြစို့ပါ။
လျှို့ဝှက်ချက် ၅။ ဝေးဝေးမသွားနဲ့
မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်မျိုးပါပဲ။ သူတို့ အချစ်ကြီးလာရင် ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံနိုင်ကြဘူး။ အရေးကြီးတယ်၊ သွားစရာ ရှိတယ်လို့ပါဆိုလည်း မရပါဘူး။ ” သူလေးထက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရှိသေးလား ” တဲ့။ နောက်ပြီး job kaayay kyi tar pae. lote pot. ya tal ဆိုတဲ့ အပြောလေးတွေနဲ့ အရည်ပျော်လု မတတ်ပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေ ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အမြဲတစေ အတူ နေလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိကြတယ်။ အားငယ် တတ်ကြတာမို့ပါ။ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် အချိန်ရနိုင် သရွေ့ကို သူတို့လေးနဲ့ အတူနေပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ ရင်ထဲက အချစ်စိတ်တွေကို ယောက်ျားတွေ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် အားဖြင့် ယောင်္ကျားလေးတွေကလည်း ကိုယ့်အခက်အခဲကို သူတို့ နားလည်လာအောင် တဖြည်းဖြည်း နားသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယျ့ဖကျက ဘယျလောကျပဲ ခဈြနပေါစေ၊ ကိုယျ့ခဈြသူမိနျးကလေးက ကိုယျ့ကို ဖှငျ့မပွောဘဲ ထိနျခနျြထားတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ(၅)ခကျြ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခဈြသူ ကောငျမလေးတှေ ထိနျခနျြထားတယျဆိုတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ(၅)ခကျြကို Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ ဝမြှေလိုကျပါတယျ။
လြှို့ဝှကျခကျြ ၁။ ပိုးပနျးဖို့အရေး မနှေးပါစနေဲ့
မိနျးကလေး တဈယောကျကို ကိုယျက စိတျဝငျစားလို့ ခဈြစကား လိုကျပွောရငျ ကောငျမလေးက ” ရှငျ့ကို ကြှနျမလေ မွငျမွငျခငျြး ခဈြစိတျဝငျသှားတယျ သိလား ” လို့တော့ ပွောမှာ မဟုတျပါဘူး။ နှာခေါငျးရှုံ့၊ ခွဆေောငျ့ပွီး ကိုယျ့ကို မွငျမွငျခငျြး အမွငျကတျ တဲ့အမူအရာ လုပျပွသှားတာကို ခံရမှာ အသအေခြာပါပဲ။ မူတာပေါ့နျော။
ကိုယျက မိနျးကလေးတဈယောကျကို လကျဆယျဖွာ ယှကျကာဆကျပွီး အသညျးနှလုံး အလှူခံနပွေီဆိုရငျ မိနျးကလေးဘကျက စတငျပွီး စဉျးစားခနျးဝငျပါပွီ။ ” အငျး ရုပျကလေးကတော့ မဆိုးဘူး၊ ခြောခြောလေးပဲ၊ ဒါပမေယျ့ မူလိုကျအုနျးမှ ” ဆိုပွီး ခဈြတော့ခဈြတယျ။ မိနျးကလေးတနျမဲ့ နှုတျအလိုကိုတော့ မလိုကျသေးဘူး ဆိုပွီး ခဈြကွောငျး ကွိုကျကွောငျး ကိုယျအမူအရာ တှနေဲ့ပဲ ပွောနပေါလိမျ့မယျ။ ခဈြပါတယျ ကွိုကျပါတယျဆိုပွီး ဗွုနျးစားကွီး အဖွပေေးအုနျးမှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲ ရုပျက ပုံမလာ၊ ပနျးမလာ တောဂိုကျ ဖွဈနမေယျ ဆိုရငျတော့ မကျြစောငျးတှေ၊ ဂြိုစောငျးတှေ၊ လကျဝါးစောငျးတှေ အကြှေးခံပွီသာမှတျပါ။ ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေး တဈယောကျရဲ့ အခဈြကို လကျဖွနျ့တောငျး တော့မယျဆိုရငျ အခြိနျအနညျးငယျကနေ အခြိနျအမြားကွီး ပိုးပနျးပေးဖို့ လိုပါမယျ။ မိနျးကလေးမို့ အရှကျအကွောကျ ကွီးတတျတဲ့ မိနျးကလေးတို့သဘာဝကို သိနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ရငျထဲမှာ ကိုယျရှိနပေမေယျ့လညျး ဖှငျ့ပွောဖို့ ခကျလှတဲ့ အနအေထားကို ကောငျးကောငျး သဘောပေါကျ နားလညျထားရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ ပိုးပနျးဖို့ အရေး ဝနျမလေးရပါဘူး။
လြှို့ဝှကျခကျြ ၂။ မပွောရစနေဲ့ အလိုကျသိပါစေ
မိနျးကလေးတှဟော ကိုယျတို့ ယောကျြားတှထေကျ ဆကျဆံရေး ကောငျးတယျလို့ ပွောလို့ရတယျ။ မိတျဆှမြေားတယျပေါ့။ ယောကျြားတှေ ထကျလညျး စကား မြားမြား ပွောနိုငျစှမျးရှိကွပါတယျ။ နောကျပွီး ဟုတျသျောရှိ မဟုတျသျောရှိ “အငျး၊ အဲ၊ အျော” လုပျတတျကွတယျ။ (Follow ကောငျးတာပေါ့) ။ မိနျးကလေး တဈယောကျနဲ့ စကားပွောလို့ သူလေးက ကိုယျ့ကို ” ဟီလိုကျ၊ ဟဲလိုကျ ” မလုပျဘဲ၊ ” အငျးလိုကျ၊ အဲလိုကျ ” ခညျြးပဲ လုပျနပွေီဆိုရငျ သခြောပေါကျ မှတျလိုကျပါ။ ကိုယျပွောနတေဲ့ စကားကို ရာနှုနျးပွညျ့ စိတျမဝငျစားဘူးဆိုတာ ကြိနျးသနေပေါပွီ။ ကိုယျက စကားတဈခှနျး ပွောလိုကျတိုငျး သူလေးက “သွ၊ အငျး၊ အဲ ဟုတျတာပေါ့၊ ဒီလိုလား၊ ဒါ မှနျတာပေါ့ ” စတဲ့ စကားလုံး တိုတိုတှနေဲ့ ပွောနပွေီဆိုရငျ ကိုယျက အလိုကျသိတော့။ သူလေးကတော့ ပါးစပျကနေ ဖှငျ့ပွောမှာ မဟုတျဘူး။ လိမ်မာပါးနပျစှာနဲ့ ကိုယျပွောနတေဲ့ အကွောငျးအရာကို ဒီမှာတငျရပျပွီး၊ ဟာသနှောပွီး တဈခွားအကွောငျးအရာ ပွောငျးပွောဖို့ ကွီးစားပတေော့။
လြှို့ဝှကျခကျြ ၃။ တဈဘကျစောငျးနငျး ခငျမငျမှုဇာတျလမျး
သဝနျတိုတာပဲ ပွောရမလား၊ အခဈြကွီးတာပဲ ဆိုရမလားပဲ။ ကောငျမလေးတဈယောကျဟာ သူ့ခဈြသူကောငျလေးရဲ့ သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ ခငျမငျ ရငျးနှီးစှာနဲ့ အပေါငျးအသငျး လုပျလို့ရပမေယျ့ သူခဈြနတေဲ့ သူ့ခဈြသူကောငျလေး ကိုတော့ သူ့သူငယျခငျြး မိနျးကလေး အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ ရငျးနှီးသှားမှာ ခငျမငျသှားမှာကို မလို လားကွပါဘူး။ ဒါကို မယုံမရှိပါနဲ့။ အရမျးခဈြကွတဲ့ သူငယျခငျြး မိနျးကလေးနှဈယောကျ ရှိတယျ။ ကောငျမလေးတဈယောကျရဲ့ ခဈြသူက သူ့ကောငျမလေး သူငယျခငျြးကို ရငျးရငျးနှီးနှီးကွီး ဆကျဆံတာကို သူ့ကောငျမလေးက နှဈသကျမှာ မဟုတျပါဘူး။ မိနျးကလေးနှဈယောကျ တဈယောကျကို တဈယောကျ မချေါနိုငျ၊ မပွောနိုငျတဲ့ အဆငျ့အထိ ရောကျသှားနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယောကျြားလေးတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူလေးရဲ့ မိနျးကလေး သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးနဲ့ တှရေ့ငျ စကားပွောတာ ဖွဈဖွဈ၊ အနအေထိုငျ အမူအယာပဲ ဖွဈဖွဈ ဆငျဆငျခွငျခွငျ ရှိသငျ့ပါတယျ။ မုနျ့ကိုသာ ဝစေားမယျ။ အခဈြကိုတော့ ဝမေစားနိုငျတဲ့ သူတို့ရဲ့ မနောကို ယောကျြားသားတှေ အလိုကျ သိနဖေို့ လိုပါမယျ။
လြှို့ဝှကျခကျြ ၄။ ကိုကိုနျော
ဘယျကောငျမလေးကမှ ကိုယျ့ခဈြသူကောငျလေးကို ကိုယျ့ထကျလှတဲ့၊ ခြောတဲ့ ကောငျမလေးနဲ့ အရောဝငျနတောကို ရှုစိမျ့မယျ၊ မုဒိတာပှားနိုငျမယျ မရှိပါဘူး။ ကိုယျကတော့ အဲဒီမဒီခြောကို ရိုးရိုးသားသား လို့ပဲပွောပွော၊ ဖွူဖွူစငျစငျ လို့ပဲဆိုဆို ဒါမှမဟုတျ နှာရောငျငနျးဖြားစိတျနဲ့ လြှာကွောရှညျနတောပဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကောငျမလေးက အစိုးရိမျတှပေိုပွီး ဘယျလိုမှ ကွညျ့မရ၊ ရှုမရ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ စိတျအားငယျ နပေါလိမျ့မယျ။ ဒ ကိုယျ့ခဈြသူက ကိုယျ့ကို ဘယျလောကျ ခဈြပါတယျ၊ ကွိုကျပါတယျ၊ သစ်စာရှိပါတယျ ဆိုတဲ့ ကတိပေးပေး တဈဖကျသတျ သံသယဝငျနလေိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ပုရိသ တှအေနနေဲ့ စုမိတဲ့အခဈြတှအေားလုံး သူလေး တဈယောကျတညျး အတှကျပါလို့ သကျသပွေနိုငျအောငျ အနအေထိုငျလေးတော့ ဆငျခွငျကွစို့ပါ။
လြှို့ဝှကျခကျြ ၅။ ဝေးဝေးမသှားနဲ့
မိနျးကလေးတှဟော တဈမြိုးပါပဲ။ သူတို့ အခဈြကွီးလာရငျ ကွောကျဖို့ ကောငျးပါတယျ။ သူတို့ မကျြစိအောကျက အပြောကျမခံနိုငျကွဘူး။ အရေးကွီးတယျ၊ သှားစရာ ရှိတယျလို့ပါဆိုလညျး မရပါဘူး။ ” သူလေးထကျ အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စရှိသေးလား ” တဲ့။ နောကျပွီး job kaayay kyi tar pae. lote pot. ya tal ဆိုတဲ့ အပွောလေးတှနေဲ့ အရညျပြျောလု မတတျပါပဲ။ မိနျးကလေးတှေ ဆိုတာ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ အမွဲတစေ အတူ နလေိုတဲ့ ဆန်ဒရှိကွတယျ။ အားငယျ တတျကွတာမို့ပါ။ မကျြစိအောကျက အပြောကျမခံနိုငျကွပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အခြိနျရနိုငျ သရှကေို့ သူတို့လေးနဲ့ အတူနပေေးနိုငျဖို့ ကွိုးစားပေးသငျ့ပါတယျ။ သူတို့ ရငျထဲက အခဈြစိတျတှကေို ယောကျြားတှေ နားလညျပေးသငျ့ပါတယျ။ အပွနျအလှနျ အားဖွငျ့ ယောင်ျကြားလေးတှကေလညျး ကိုယျ့အခကျအခဲကို သူတို့ နားလညျလာအောငျ တဖွညျးဖွညျး နားသှငျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာ အမြန်ပျောက်စေမဲ့ အကောင်းဆုံး သဘာဝနည်း